मियागी प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
म्याटुशिमा, मितागी प्रान्त, जापान = शटरस्टकमा चेरी रूखहरू
यदि तपाइँ पहिलो पटक जापानको तोहोकु क्षेत्रमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि मियागी प्रान्तमा पहिले जानु राम्रो उपाय हो। मियागी प्रान्तमा सेन्दै शहर छ, तोहोकुको सबैभन्दा ठूलो शहर। तपाईं यस सुन्दर शहरको तोहोकुभरि नै स्वादिष्ट खानाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। मत्सुशिमा खाडी सेन्डाई शहरको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा फैलिएको यसको प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि प्रसिद्ध छ। तपाईले विश्व भर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ जुन माथिको जहाजमा देखाइएको छ। सान्रिकु भनिने यो क्षेत्रलाई मार्च ११, २०११ मा भएको ग्रेट इस्ट जापान भूकम्पले ठूलो असर पारेको थियो। अझै पनि मानिसहरूले समुद्रलाई माया गर्छन् जसले उनीहरूलाई ठूलो आशिष् दिन्छ र समुद्रसँगै बस्दछ।
शिमोट्सु बे मिनामी सान्रिकु-चो = शटरस्टकको बिहान
मियागी प्रान्त टोहोकु क्षेत्रको प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित छ र यसको पश्चिमी भाग ओउ पर्वत श्रृंखलाको साथ सम्पर्कमा छ। यो टोकियोबाट करीव 350 XNUMX० किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ।
मियागी प्रान्तको लगभग २. 2.3. मिलियन जनसंख्या छ र यो धेरै पहिलेदेखि तोहोकु क्षेत्रको केन्द्र भएको छ। केन्द्र सेन्दै शहर हो। मियागी प्रान्तका करीव आधा मानिसहरू यस शहरमा बस्छन्।
मियागी प्रान्तमा प्रशान्त महासागरमा, गहिरो इन्डेन्टेड समुद्रीतट जारी छ। यो क्षेत्र ठूलो सुनामीको चपेटामा परेको छ जब धेरै पहिले ठूलो भूकम्प आयो। यद्यपि त्यहाँ गहिरो खाडीमा बस्ने थुप्रै माछा र शेलहरू छन् जसले हामीलाई धनी आशिष्‌ दिन्छन्।
मियागी प्रान्तमा मौसम र मौसम
जाडोमा मात्सुशिमा खाडी, मियागी प्रान्त, जापान = शटरस्टक
मियागी प्रान्त तोहोकु क्षेत्रको प्रशान्त क्षेत्रमा भएकोले, जाडोमा जापान सागर छेउसम्म हिउँ पर्दैन। यदि तपाईं हिउँ दृश्यको प्रत्याशामा यस क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने यो निराशाजनक हुन सक्छ। यद्यपि, मियागी प्रान्तको पश्चिमी भागमा हिमालहरू भारी हिउँ पर्ने क्षेत्रहरू हुन्। हिउँद हिउँदमा पर्याप्त जम्मा हुन्छ।
यो क्षेत्र टोकियो भन्दा वर्षभरि चिसो छ, र यो दुर्लभ छ कि गर्मी अधिकतम तापमान 35 XNUMX डिग्री भन्दा बढी हुनेछ।
प्रशान्त महासागरको साथ सेन्डाइ एयरपोर्टमा, नियमित उडानहरू तलका एयरपोर्टहरूमार्फत सञ्चालन गरिन्छ। एउटा रेलवे सिंदै एयरपोर्टसँग सिधा जडित छ, र यो लगभग २ minutes मिनेट ट्रेनबाट सेंडाई एयरपोर्ट स्टेशनबाट सेंडाई स्टेशन सम्म जान्छ।
सियोल / इनचान
शंघाई / पुडोंग, बेइजि / / राजधानी
सप्पोरो / नयाँ Chitose
ओसाका / कन्साई
मियागी प्रान्तमा तोहोकु शिन्कानसेनको stations स्टेशनहरू छन्।
टोकियो स्टेशनबाट सेन्दै स्टेशनको लागि आवश्यक समय प्रत्येक ट्रेनमा निर्भर गर्दछ, तर यो करिब २ घण्टा हुन्छ। यो एक घण्टा21 मिनेट लिन सक्दछ यदि तपाइँ छिटो Shinkansen प्रयोग गर्नुहुन्छ।
सेंडाई कैसल (Aoba महल)
सेन्दै १.१ मिलियन जनसंख्याको ठूलो सहर हो, जुन तोहोकु क्षेत्रमा उत्कृष्ट छ। तोकुगावा शोगुनेटको युगमा तोहोकु क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो शक्तिमा घमण्ड गर्ने मिति कुलको सेन्दै क्यासल (अओबा क्यासल) थियो।
यदि तपाईं सेन्दै जानुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु तपाईं सेंदई क्यासल साइट पहिले भ्रमण गर्नुहोस्। यस महलको करिब 66,000 XNUMX,००० वर्ग मिटर धेरै आगलागी र भैंचालोले घेर्यो र दोस्रो विश्वयुद्धको बेला हवाई आक्रमणबाट यो पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। जे होस्, यदि तपाई माउन्टेमा हुनमानु (मुख्य बेली) ट्रेसमा जानु भयो। अोबा, तपाई सम्पूर्ण सेन्दै देख्न सक्नुहुन्छ।
यस महलमा, त्यहाँ मासमोन DATE को मूर्ति छ जुन माथिको तस्वीरमा देखिएको छ। उहाँ स्वामी हुनुहुन्छ जसले १ cast औं शताब्दीको सुरूमा यो किल्ला बनाउनुभयो। यो मूर्ति सेन्दैको प्रतीक हो भनिन्छ।
१am औं शताब्दीमा तोमुको क्षेत्र मासुमुने सबैभन्दा शक्तिशाली योद्धा हो जब समुराईले कडा लडाई लडेका थिए। उहाँ धेरै फेसनदार हुनुहुन्थ्यो। सेन्डाई नागरिक अझै पनी उनी बलियो र स्टाइलिश थियो।
सेन्दै ग्युतान (ऑक्स जिब्रो भाँडा)
जापान मियागी सेन्दै स्टेशन = शटरस्टकमा सूप र चामलको साथ सेन्दै ग्युतन (ओक्स जीभका भाँडाहरू)
सेंडाइ ग्युतन (ऑक्स जीभ व्यंजनहरू) सेंडाईको विशेषता हो। त्यहाँ धेरै Gyutan रेस्टुरेन्ट सेंदई शहर मा छ। त्यहाँ Gyutan Street, जहाँ Gyutan रेस्टुरेन्ट सेंडाई स्टेशन मा भेला भयो। यदि तपाइँ गोमांसलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ भने, कृपया Gyutan सबै प्रकारले खानुहोस्।
खुशी डु boats्गा
मियागी प्रान्तको सबैभन्दा लोकप्रिय दर्शनीय स्थल मत्सुशिमा हो। नोर मा अवस्थित
मियागी प्रान्तको सबैभन्दा लोकप्रिय दर्शनीय स्थल मत्सुशिमा हो। सेन्दै शहर क्षेत्रको पूर्वोत्तरमा अवस्थित, यस खाडीमा असंख्य साना टापुहरू छन्। यस खाडीको दृश्यलाई लामो समयदेखि जापानको तीन सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरू मध्ये एक भनिन्छ।
जब तपाईं मत्सुशिमा जानुहुन्छ, तपाईं सेरदै स्टेशनबाट JR Sengoku लाइनमा सवारी गर्नुहुन्छ। त्यसो भए मत्सुशिमाकाइगन स्टेशनमा जानुहोस्। तपाईं यहाँबाट बोर्डमा जान सक्नुहुन्छ।
मात्सुशिमामा ठूला र साना आनन्द डु boats्गाहरू छन् र तपाईं जहाजबाट टापुहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया तपाईं खाडी वरिपरि 50० मिनेटमा जान सक्नुहुन्छ।
सेन्दै शहर क्षेत्रको अस्टस्ट, यस खाडीमा असंख्य साना टापुहरू छन्। यस खाडीको दृश्यलाई लामो समयदेखि जापानको तीन सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरू मध्ये एक भनिन्छ।
शेफ सावधानीपूर्वक ग्रिल कस्तूरी। मत्सुशिमा खाडी = शटरस्टकमा आइपुगेका पर्यटकहरूको सेवा गर्न
मत्सुशिमाको विशेषता स्वादिष्ट कस्तूरी हो। मत्सुशिमा खाडीमा, कस्तूरी खेती फस्टाइरहेको छ। मस्तुसिमामा रेस्टुरेन्ट र होटेलहरूमा धेरै कस्तूरी भाँडाहरू दिइन्छन्, त्यसैले कृपया सबै तरिकाले सिस्तारहरू खाएर हेर्नुहोस्। यहाँ कस्तूरे ताजा छन्, त्यसैले यो साँच्चै स्वादिष्ट छ।
ग्रेट इस्ट जापान भूकम्प पछि, मैले यस बन्दरगाह शहरमा कस्तूरी खेतीमा संलग्न बुढा व्यक्तिहरूको कथा सुनेको छु। उनको छोरोलाई सुनामीले आक्रमण गर्‍यो र तटको बहाव भयो। तर ऊ पौडीयो र फर्कियो। तिनीहरू समुद्रसँग डराउँछन्, तर एकै साथ उनीहरू समुद्रलाई सम्मान गर्दछन् र समुद्रबाट आशिष्हरू पाउँछन्।
>> मत्सुशिमाको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्